Jesosy - ny sorona tsara kokoa - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-03 > Jesosy - ilay sorona tsara kokoa
Tonga tany Jerosalema i Jesosy indray mandeha talohan'ny nijaliany, izay nanomanan'ny olona manana sampana rofia ho azy. Vonona hamoy ny ainy izy noho ny fahotantsika. Andeha hojerentsika io fahamarinana mahatalanjona io amin'ny alàlan'ny fitodihana any amin'ny epizianina, izay mampiseho fa ny fisoronana ambony an'i Jesosy dia ambony noho ny fisoronana Aharôna.
1. Manaisotra ny ota ny soron’i Jesosy
Isika olombelona dia mpanota voajanahary ary ny ataontsika dia manaporofo izany. Inona ny vahaolana? Ny nahavanon-doza tamin'ny fifanekena taloha dia nanala ny ota ary nanondro ilay hany vahaolana tokana, ilay sorona tanteraka sy farany nataon'i Jesosy. Jesosy dia ilay niharam-boina tsara kokoa tamin'ny fomba telo:
Mila ny soron'i Jesosy ihany
« Fa aloky ny fananana ho avy ihany ny lalàna, fa tsy ny toetran’ny fananana, ka izany no tsy hahatanterahan’izay manao sorona ho lavorary mandrakizay, satria tsy maintsy manao fanatitra toy izany koa isan-taona. Raha tsy izany, tsy ho nitsahatra ve ny sorona, raha nadio indray mandeha monja ireo nitarika ny fanompoam-pivavahana ka tsy nanana fieritreretana momba ny fahotany intsony? Fa iray ihany no mampahatsiahy ny fahotana isan-taona. Fa ny ran’omby sy ny ran’osy dia tsy mahaisotra ny ota» (Heb. 10,1-4, LTA).
Ny lalàna notendren'Andriamanitra mifehy ny fanaovana sorona ny fanekena taloha dia nanan-kery nandritra ny taonjato maro. Ahoana no fahitana ireo niharam-boina ho ambany? Ny valiny dia, ny lalàn'i Mosesy dia "aloky ny entana ho avy" ihany fa tsy ny toetran'ny entana akory. Ny rafitra fanaovana sorona amin'ny lalàn'i Mosesy (fanekena taloha) dia maodelin'ny sorona hataon'i Jesosy. ho antsika. Ny rafitra nifanaovan'ny fanekena taloha dia vetivety, tsy nisy naharitra, ary tsy natao haharitra. Ny famerimberenana ny sorona isan'andro sy ny andro fanavotana isan-taona dia maneho ny fahalemena misy ao amin'ny rafitra iray manontolo.
Ny sorona biby dia tsy afaka hanaisotra tanteraka ny helok'olombelona. Na dia nampanantena famelan-keloka tamin'ireo niharam-boina tao ambanin'ny fanekena taloha aza Andriamanitra, dia rakotra vetivety ny fahotana izany fa tsy fanesorana ny heloky ny fon'ny olona. Raha izay no nitranga dia tsy voatery nanao sorona fanampiny ireo niharam-boina fa fahatsiarovana ny ota fotsiny. Ireo sorona natao tamin'ny Andro Fanavotana dia nanarona ny fahotan'ny firenena; fa ireo fahotana ireo dia tsy "nesorina", ary tsy nahazo fijoroana ho vavolombelona momba ny famelan-keloka sy fanekena avy amin'Andriamanitra ny olona. Mbola nisy nilana olona niharam-boina kokoa noho ny ran'ny omby sy osy, izay tsy nahala ny fahotany. Ny sorona tsara kokoa an'i Jesosy ihany no afaka manao an'izany.
Ny fahavononan’i Jesosy atao sorona ny tenany
“Izany no ilazany rehefa tonga amin’izao tontolo izao Izy: Tsy mba nilainao ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra; fa vatana no nanamboaranao ahy. Tsy tianao ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota. Dia hoy izaho: Indro, avy Aho - voasoratra ao amin'ny boky ny momba Ahy - hanao ny sitraponao, Andriamanitra ô. Hoy izy tamin’ny voalohany: “Tsy tianao ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra dorana ary ny fanatitra noho ny ota, ary tsy sitrakao izany”, izay natolotra araka ny lalàna ihany. Hoy anefa izy avy eo: “Indro, tonga hanao ny sitraponao aho”. Dia alainy ny voalohany mba hampidiriny ny faharoa » (Hebreo 10,5- iray).
Tsy Andriamanitra izy io, fa tsy olona rehetra, izay nanao sorona ilaina. Ny teny notononiny dia nanambara fa i Jesoa mihitsy no fanatanterahana ireo niharan'ny fanekena taloha. Rehefa natao sorona ny biby dia nantsoina hoe sorona, fa ireo atin'ny voa dia nantsoina hoe sakafo sy zava-pisotro. Ireny rehetra ireny dia tandindon'ny soron'i Jesosy ary mampiseho ny lafiny sasany amin'ny asany ho famonjena antsika.
Ny fehezanteny hoe "fa manomana vorona ho ahy ianao" dia miantso ny Salamo 40,7 ary namerina hoe: "Efa nosokafanao ny sofiko". Ny teny hoe "sofina misokatra" dia midika fa vonona hihaino sy hankato ny sitrapon'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra vatana olombelona ny zanany mba hahafahany manatanteraka ny sitrapon'ny rainy eto an-tany.
Ny tsy fahafalian'Andriamanitra momba ireo niharan'ny fanekena taloha dia voalaza in-droa. Tsy midika akory izany hoe diso ireo niharam-boina ireo na tsy nanana tombony ny mpino tso-po. Andriamanitra dia tsy mifaly amin'ny lasibatra toy izany afa-tsy ny fon'ny mankatò an'ireo niharam-boina. Tsy misy sorona, na dia lehibe aza, izay afaka hisolo ny fo mankatò!
Tonga mba hanao ny sitrapon 'ny Ray i Jesosy. Sitrapony ny hoe ny fanekena vaovao no misolo ny fanekena taloha. Tamin'ny alàlan'ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty, dia "nanafoana" ny fanekena voalohany nampiasa ny faharoa i Jesosy. Ny mpamaky ny judeo-kristiana tany am-boalohany amin'ity taratasy ity dia nahatakatra ny dikan'io fanambarana manaitra io - maninona no miverina amin'ny fanekena iray izay nesorina?
Ny mandaitra ny soron'i Jesosy
“Satria nahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra Jesosy Kristy ka nanolotra ny tenany ho fanatitra, dia efa nohamasinina indray mandeha mandrakizay isika ankehitriny” (Heb. 10,10 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Ny mpino dia "nohamasinina" (midika hoe "atokana hampiasaina masina") amin'ny alàlan'ny soron'ny tenan'i Jesosy, izay natolotra indray mandeha ho sorona. Tsy nisy tratry ny fanekena taloha nanao an'izany. Tao amin'ny fanekena taloha, ny sorona dia tsy maintsy "nohamasinina" hatrany tamin'ny fahalotoam-pitondran-tenany. Fa ny "olomasina" amin'ny fanekena vaovao dia "natokana" ihany tamin'ny farany - tsy noho ny fahamendrehany na ny asany, fa noho ny ny sorona lavorary nataon'i Jesosy.
2. Tsy mila averina ny soron’i Jesosy
“Ny mpisorona hafa rehetra dia mitsangana eo amin’ny alitara isan’andro mba hanao ny fanompoany, ary manao fanatitra imbetsaka toy izany koa izay tsy mahaisotra ny ota. I Kristy kosa, rehefa avy nanao sorona tokana ho an’ny ota, dia nipetraka mandrakizay teo amin’ny fitoerana be voninahitra eo an-kavanan’Andriamanitra ary niandry ny hahatongavan’ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Satria io sorona tokana io no nahafahany tanteraka mandrakizay izay rehetra manaiky hohamasinina ho afaka amin’ny helony. Manamafy izany koa ny Fanahy Masina. Ao amin’ny Soratra Masina (Jer. 31,33-34) Izao no voalaza voalohany indrindra: “Ny fanekena hataoko aminareo amin’ny hoavy dia ho toy izao: Izaho, hoy Jehovah, no hametraka ny lalàko ao am-pony sy hosoratako ao am-pony”. Ary avy eo dia hoy izy: "Tsy hotsarovako intsony ny fahotanareo sy ny tsy fankatoavanareo ny didiko". Fa raha misy famelan-keloka, dia tsy ilaina fanatitra intsony » (Heb. 10,11-18 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Ilay mpanoratra ny taratasy ho an'ny hebreo dia nampitaha ny mpisoronabe amin'ny fanekena taloha tamin'i Jesosy, ilay mpisoronabe lehibe amin'ny fanekena vaovao. Ny hoe niara-nipetraka tamin'ny Ray i Jesosy taorian'ny niakarany tany an-danitra dia porofo fa vita ny asany. Mifanohitra amin'izany kosa, ny ministeran'ny fanekem-pihavanana taloha dia tsy tanterahina na oviana na oviana; nanao sorona mitovy ihany isan'andro izy ireo.Ny famerimberenana izany dia porofo fa tsy tena nesorin'izy ireo ny fahotany. Izay biby an'arivony maro no tsy vitan'izy ireo, dia nahavita mandrakizay i Jesosy ary ho an'ny rehetra, ny sorona lavorary.
Ny andian-teny hoe “[Kristy] ... efa mipetraka” dia manondro ny Salamo 110,1: “Mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao.” Efa nomem-boninahitra i Jesosy ary nisolo ny toeran’ny mpandresy. izay matoky azy ankehitriny dia tsy tokony hatahotra, satria “tanterahina mandrakizay” (Heb. 10,14). Eny tokoa, ny mpino dia mahatsapa ny “fahafenoana ao amin’i Kristy” (Kol. 2,10). Amin’ny alalan’ny firaisana amin’i Jesosy no ijoroantsika ho lavorary eo anatrehan’Andriamanitra.
Ahoana no ahafantarantsika fa manana izany toerana izany eo anatrehan'Andriamanitra isika? Ireo niharam-boina teo ambanin'ny fanekena taloha dia tsy afaka nilaza fa "tsy manana feon'ny fieritreretana intsony ny fahotany", fa ny mpino amin'ny fanekem-pihavanana vaovao dia afaka milaza fa tsy te hahatsiarovana ny fahotany sy ny hadisoany intsony Andriamanitra. Ka "tsy misy intsony ny sorona noho ny ota". Nahoana? Satria tsy misy sorona intsony “izay mamela ny ota”.
Rehefa manomboka matoky an'i Jesosy isika dia mahatsapa ny fahamarinana fa ny helontsika rehetra dia voavela ao aminy ary amin'ny alalany. Io fifohazana ara-panahy io, izay fanomezana avy amin'ny Fanahy ho antsika dia manaisotra ny fahatsapana ho meloka rehetra. Finoana no ahafantarantsika fa voavaha mandrakizay ny fanontaniana momba ny ota ary afaka miaina mifanaraka amin'izany isika. Amin'izany fomba izany dia "hamasinina" isika.
3. Manokatra ny lalana mankany amin’Andriamanitra ny soron’i Jesosy
Teo ambanin’ny fanekena taloha, dia tsy nisy mpino ho sahy niditra tao amin’ny fitoerana masina ao amin’ny tabernakely na ny tempoly. Na ny mpisoronabe aza dia niditra tao amin’io efitrano io indray mandeha isan-taona. Ilay ridao matevina nanasaraka ny fitoerana masina sy ny masina dia toy ny sakana teo amin’ny olombelona sy Andriamanitra. Ny fahafatesan’i Kristy ihany no afaka nandrovitra an’io ridao io hatrany ambony ka hatrany ambany5,38) ary sokafy ny lalana mankany amin’ny fitoerana masina any an-danitra izay onenan’Andriamanitra. Miaraka amin’ireo fahamarinana ireo ao an-tsaina, ny mpanoratra ny Taratasy ho an’ny Hebreo dia mandefa izao fanasana am-pitiavana manaraka izao:
« Koa ankehitriny, ry rahalahy sy anabavy malala, dia manana fidirana malalaka sy tsy misy sakantsakana ao amin’ny fitoerana masin’Andriamanitra isika; Nanokatra izany ho antsika tamin’ny rany i Jesosy. Tamin’ny alalan’ny lambam-baravarana – amin’ny teny mivaingana: tamin’ny alalan’ny sorona ny vatany – dia nanamboatra lalana izay tsy mbola narahin’olona, ​​lalana mitondra mankany amin’ny fiainana. Ary isika manana mpisoronabe, izay eo ambany fahefan'ny tranon'Andriamanitra rehetra. Izany no antony iriantsika hanatona an’Andriamanitra amin’ny fahafoizan-tena tsy misaraka sy feno fahatokiana sy fahatokiana. Ny ran’i Jesosy ao anatintsika lalina indrindra dia voafafy ka afaka amin’ny feon’ny fieritreretana meloka; isika - ara-panoharana - nosasana tamin'ny rano madio ny vatantsika rehetra. Ary koa, aoka isika hihazona ny fanantenana izay ianteherana; fa mahatoky Andriamanitra ka mitandrina ny teny fikasany. Ary satria tompon’andraikitra isika, dia te hifampahery mba hifankatia sy hanao ny tsara. Noho izany dia zava-dehibe ny tsy hialantsika amin’ny fivoriantsika, tahaka ny efa fanaon’ny sasany, fa vao mainka hifampaherezana, araka ny hitanao amin’ny tenantsika, fa antomotra ny andro hiverenan’ny Tompo » (Heb. 10,19-25 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Ny fahatokiantsika fa avela hiditra ao amin’ny fitoerana masina indrindra isika, mba ho eo anatrehan’Andriamanitra, dia mifototra amin’ny asan’i Jesosy, Mpisoronabentsika lehibe. Tamin’ny Andro Fanavotana, ny mpisoronabe tao amin’ny fanekena taloha dia tsy afaka niditra tao amin’ny fitoerana masina indrindra tao amin’ny tempoly raha nanolotra ny ran’ny fanatitra izy (Heb. 9,7). Fa ny fidirantsika eo anatrehan’Andriamanitra dia tsy amin’ny ran’ny biby, fa amin’ny rà nalatsak’i Jesosy. Io fidirana malalaka eo anatrehan’Andriamanitra io dia vaovao fa tsy ao anatin’ny fanekena taloha, izay voalaza fa “lany andro sy lany andro” ary “tsy ho ela” dia hanjavona tanteraka, izay milaza fa ny Hebreo dia nosoratana talohan’ny nandravana ny tempoly tamin’ny taona 70 am.f.i. Antsoina hoe “làlana mankany amin’ny fiainana” koa ny fomba vaovaon’ny fanekena vaovao (Heb. 10,22) satria i Jesosy dia “velona mandrakizay ka tsy hitsahatra hitsangana ho antsika” (Heb. 7,25). Jesosy mihitsy no lalana vaovao sy velona! Izy no Fanekena Vaovao amin’ny tena manokana.
Manatona an’Andriamanitra malalaka sy amim-pahatokiana isika amin’ny alalan’i Jesosy, Mpisoronabentsika amin’ny alalan’ny “tranon’Andriamanitra”. “Ity trano ity isika, raha mitana amin’ny fahatokiana ny fanantenana izay nomen’Andriamanitra antsika, izay mameno antsika amin’ny fifaliana sy ny reharehantsika.” (Heb. 3,6 Fandikan-teny Genève Vaovao). Rehefa maty maritiora teo amin’ny hazo fijaliana ny vatany ary natao sorona ny ainy, dia notriarin’Andriamanitra ny voalin’ny tempoly, izay maneho ny lalana vaovao sy velona izay misokatra ho an’izay rehetra matoky an’i Jesosy. Maneho izany fahatokiana izany isika amin’ny alalan’ny famaliana amin’ny fomba telo, araka ny nosoritan’ny mpanoratra ny Hebreo ho fanasana amin’ny fizarana telo:
Aleo dingana ao
Teo ambanin'ny fanekena taloha dia tsy afaka manatona ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny tempoly ny pretra aorian'ny fanaovana fombafomba isan-karazany. Eo ambanin'ny Fanekempihavanana Vaovao, isika rehetra dia manana fidirana malalaka amin'Andriamanitra amin'ny alalàn'i Jesosy amin'ny alàlan'ny fanadiovana ny atiny (fo) izay namboarina ho an'ny olombelona tamin'ny fiainany, ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiakarany. Ao amin'i Jesosy dia "afafy amin'ny ran'i Jesosy ao am-povoantsika" isika ary "ny vatantsika hosasana amin'ny rano madio." Vokatr'izany dia manana firaisana tanteraka amin'Andriamanitra isika; ary noho izany dia asaina "manatona" isika - hahazoana miditra , izay antsika ao amin'i Kristy, koa aleo isika hatanjaka, be herim-po ary feno finoana!
Andao hifikirantsika tsara
Ireo mpamaky jodeo-kristiana tany am-boalohany ny Taratasy ho an’ny Hebreo dia nalaim-panahy handao ny finoany an’i Jesosy mba hiverenana amin’ny lamin’ny fanompoam-pivavahana ao amin’ny Testamenta Taloha ho an’ny mpino jiosy. Ny fanamby ho azy ireo dia ny "hifikitra mafy" dia tsy ny fihazonana ny famonjena azy, izay azo antoka ao amin'i Kristy, fa ny "fifikirana mafy amin'ny fanantenana" izay "ambarany". Afaka manao izany amin’ny fahatokiana sy ny faharetana ianao satria Andriamanitra, izay nampanantena fa hahazo ny fanampiana ilaintsika amin’ny fotoana mety (Heb. 4,16), dia “tsy mivadika” ary mitana izay nampanantenainy. Raha mitazona ny fanantenany ao amin’i Kristy sy miantehitra amin’ny fahatokian’Andriamanitra ny mpino, dia tsy hihozongozona izy ireo. Andeha isika hibanjina ny fanantenana sy hatoky an’i Kristy!
Aza avela hiala ny fivoriantsika
Ny fahatokisantsika amin'ny maha-mpino an'i Kristy antsika hiditra ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy vitan'ny hoe manokana, fa miaraka. Azo heverina fa ny kristiana jiosy dia hiangona miaraka amin'ny jiosy hafa ao amin'ny synagoga amin'ny andro sabata ary hihaona amin'ny vondron'olona kristiana amin'ny alahady. Nalaim-panahy hiala teo amin ’ny vondron’olona Kristiana izy ireo. Ny taratasy ho an'ny Hebreo dia manazava fa tsy tokony hanao izany izy ireo, ary mifampahery mba hanohy ny fanatrehana fivoriana.
Tsy tokony hihevitra ny tenantsika mihitsy ny fiarahantsika amin’Andriamanitra. Antsoina isika hiombona amin’ny mpino hafa ao amin’ny fiangonana eo an-toerana (tahaka ny antsika). Ny fanantitranterana eto amin’ny Taratasy ho an’ny Hebreo dia tsy ny amin’izay azon’ny mpino avy any am-piangonana, fa ny amin’izay atolony amin’ny fiheverana ny hafa. Ny fanatrehana tsy tapaka ireo fivoriana dia mandrisika sy mandrisika ireo rahalahy sy anabavintsika ao amin’i Kristy “hifankatia sy hanao soa”. Ny antony lehibe mahatonga izany fikirizana izany dia ny fiavian’i Jesosy Kristy. Tsy misy afa-tsy andalan-teny faharoa mampiasa ny teny grika ho an’ny “fivoriana” ao amin’ny Testamenta Vaovao, ary ao izany 2. Thessalonians 2,1, izay nadika hoe “nivory (NGÜ)” na “Fivoriambe (LUT)” ary ilazana ny fiavian’i Jesosy fanindroany amin’ny faran’ny taona.
Isika dia manana ny antony rehetra hananantsika fahatokisana mba handrosoana amin'ny finoana sy ny fikirizana. Nahoana? Satria ny Tompo izay tompointsika dia sorona avo indrindra antsika - ny sorona nataony ho antsika dia ampy ho an'ny zavatra rehetra ilaintsika. Ny mpisoronabe tonga lafatra sy mahefa indrindra no hitondra antsika ho any amin'ny tanjona - hiaraka amintsika foana Izy ary hitarika antsika hahavita.